Nagu saabsan - Huaian Shengda Makiinado Co., Ltd.
Shirkaddu waxay ku taal Degmada Huai'an, Magaalada Huai'an, oo leh meel dhisme ka badan 60,000 mitir murabac iyo 6 warshadood oo waaweyn oo casri ah. Shirkaddu waxay soo bandhigtay daraasiin xarumo waaweyn oo heer sare ah oo toosan, jiif ah iyo kuwa gaan ah oo ka socda shirkadaha caalamiga ah ee caanka ah sida Doosan, Japan Sun Industrial Machinery Co., Ltd. Waxaan sidoo kale haysannaa in ka badan 200 nooc oo ah qalab mashiinno kala duwan oo CNC ah. iyo qalab gaar ah. Waxay sameysay xarumo lagu baaro heerka koowaad iyo sheybaarro sida CMM. Shirkadaha shirkadda ee muddada-dheer la shaqeeynaya dubbe hammaarka hammigiisa waxaa ka mid ah Sany Heavy Industry, XCMG, SDLG iyo shirkado waaweyn oo ka shaqeeya dhinaca mashiinada dhismaha.
Shabakadda iibka wax soo saarka ee shirkaddu waxay ka kooban tahay 28 gobol iyo gobollo ku yaal Shiinaha. Shirkaddu waxay heshay ISO9001: 2016, shahaadooyinka EU CE.
Shirkaddu waxay leedahay injineero sare, musharrixiinta dhakhaatiirta oo leh tayo sare oo tiknoolajiyad ah, waxay sameeyeen koox cilmi baaris iyo hal-abuurnimo madax-bannaan oo madax-bannaan. Shirkaddu waxay lahayd in ka badan 30 shati. Waxay noqotay shirkad hormuud u ah qaybaha aasaasiga ah iyo mashiinka kalasooca caqliga leh oo tiro badan, tayo sare leh iyo tiknoolajiyad sare ku leh warshadaha.
Qalabka ceyriin- Macdanta- Processing- Daaweynta kuleylka- shiidi-ururinta- Tijaabinta- Rinjiyeynta- xirxirida
Waxaan doorannaa alaabo ceyriin oo tayo sare leh, waxaanna u adeegsanaa CMM-ballaaran oo ballaaran si aan ugu fulino kormeer dhan walba ah oo ku saabsan qaybaha muhiimka ah sida dhululubbada iyo bistooladaha si loo hubiyo qaabka iyo dulqaadka booska iyo tayada kulanka
Shirkaddu waxay heshay ISO9001: 2016, shahaadooyinka EU CE. Wada-hawlgalayaasha muddada-dheer ee shirkadda ku jira dubba-hameedka hawo-qodista waxaa ka mid ah Sany Heavy Industry, XCMG, SDLG iyo shirkado waaweyn oo ka mid ah mashiinnada dhismaha.